Vaovao - Fiarovana ny fitaovana mekanika toy ny mixers
Andao hiresaka momba ny fiarovana ny mixer sy ny fitaovana mekanika hafa. Amin'ny maha-mpitarika ny indostrian'ny mixer ao Shanghai ahy, avelako hiresaka aminao ny tonian-dahatsoratry ny Shanghai Tops Group Machines Equipment Co., Ltd.
Nandritra ny fotoana lava dia mino ny olona fa miankina amin'ny fahamendrehany ny fiarovana ny fitaovana mekanika. Noho izany, ny asa fisorohana bebe kokoa dia ny fohy kokoa ny vanim-potoana fanamboarana ary ny azo antoka ny fitaovana mekanika. Izany no nampiasan'ny orinasa mpikarakara mekanika sasany toy ny mixer sy ny milina fanaparitahana nandritra ny taona maro mba hanarahana fomba fikajiana fisorohana mifantoka amin'ny fikojakojana. Izany hoe, na manao ahoana na manao ahoana ny toerana misy ny teknika sy ny tontolon'ny fampiasana ny zavatra fikojakojana manokana, ny fikojakojana tsy maintsy atao (toy ny fikojakojana ny lalàna ankehitriny, faharoa, ary ny fahatelo) ary ny fikojakojana kendrena dia tsy maintsy tanterahina mifanaraka amin'ny fotoana voatondro mitovy na mileage. Ity fomba fikojakojana ara-dalàna ity dia mety kokoa amin'ny fikojakojana ireo fitaovana sy fitaovana mekanika tany am-boalohany, ary nitana anjara toerana lehibe tamin'ny fikojakojana ireo fitaovana mekanika ao amin'ny fireneko.
Ny rafitra fikojakojana ara-dalàna aloha dia nampitombo ny asa fikojakojana, ny vidin'ny fikolokoloana ary ny fihenan'ny fotoana. Vokatr'izany dia maro ny fikojakojana tsy mandaitra natao, fa ny tsy fahombiazana tampoka sy tany am-boalohany dia tsy azo nesorina ara-potoana. Ny fandalinana statistika ny angon-drakitra tsy fahombiazana dia mampiseho fa ny fikojakojana matetika dia tsy mandaitra amin'ny fifehezana ny tsy fahombiazana maro, ary ny fizahana ny lozisialy natao dia tsy afaka manome ny tena toe-javatra misy raha toa ka mety tsy hahomby ireo ampahany mbola azo ampiasaina. Ny fanaparitahana be loatra sy ny fanamboarana azy dia mora Mamokatra lesoka namboarin'olombelona, ​​mampitombo ny fikojakojana fikojakojana ary mampihena ny fahombiazan'ny fikojakojana.
Ny teôria dia manaporofo fa ho an'ny fitaovana mekanika sarotra, ny tsy fahombiazana dia tampoka indrindra, ary ny fikojakojana tsy tapaka dia tsy afaka manafoana ny tsy fahombiazana tampoka. Noho izany, tamin'ny voalohan'ny taona 1960 dia nanomboka nisalasala ny amin'ny fomba fikojakojana nentim-paharazana ny olona. Nandritra io vanim-potoana io dia nisy toerana sasany nanomboka nitady tamin'ny alàlan'ny asa fanandramana toy ny fampiharana ny drafitra azo itokisana, ny fikojakojana kendrena, ny fanaraha-maso ary ny fanoloana ny fangatahana, ary ny fomba fikojakojana-centric azo antoka tamin'ny voalohany dia namboarina tamin'ny alàlan'ny statistika.
Shanghai Tops Group Machines Equipment Co., Ltd. dia mpanamboatra mixeur matihanina ary miasa ihany koa amin'ny masinina fonosana vovo-dronono, milina famonosana vovoka mandeha ho azy ary milina famenoana be dia be. Ny kolontsain'ny orinasanay: Ny vehivavy dia ampiasaina ho lehilahy, ny lehilahy ampiasaina ho omby, ary ny fanampiana avy any ivelany dia tsy ampiasaina amin'ny maha-olona. Hanolotra anao amin'ny fo manontolo serivisy kalitao izahay!